Wondla umndeni ngemali yezifonyo
UNKSZ Nomonde Mthembu, waseMgungundlovu, ojabulise okwengane encane uNgqongqoshe wamaPhoyisa kuleli, uMnuz Bheki Cele, ethenga kuye izifonyo Isithombe: SITHUNYELWE
NONTUTHUKO NGUBANE | May 14, 2020
UJABULISE okwengane encane owesifazane waseMgungundlovu ngesikhathi uNgqongqoshe wamaPhoyisa kuleli, uMnuz Bheki Cele, ethenga izifonyo kuyena njengoba leli bhizinisi kuyiyona ndlela aseziphilisa ngayo nomndeni wakhe.
UNksz Nomonde Mthembu waseMgungundlovu, osebenzela kwinxanxathela yezitolo KwaMabulala, eDambuza, utshele Isolezwe ukuthi selokhu kwande isidingo sezifonyo, ube esekhetha ukuqala ibhizinisi lokuzidayisa.
NgoMsombuluko uCele ubehambele le nxanxathela ukuyobheka ukuthi abantu bayayilandela yini imithetho kathaqa njengoba kuhlasele igciwane iCorona. UCele uzithele kowesilisa obengenaso isifonyo wabe esemthengela kuNksz Mthembu.
“Kungijabulise kakhulu ukuba uCele axhase ibhizinisi lami ngokuthenga izifonyo zami. Isifonyo sisodwa uR30, yena uthenge ezimbili ngoR100, wathi angigcine ushintshi. Uthengele owesilisa obengenaso wabe esethenga esakhe azosigqoka,” kusho lo wesifazane ejabule.
Elandisa Isolezwe uthe wondla izingane nomndeni ngokudayisa izifonyo. Uthe ngaphambi kokuba kube negciwane iCorona ubehlala ekhaya. Uma kwenzekile ubedayisa ezinye izinto.
“Selokhu kwaba neCorona ukudayisa kwami izifonyo kungisiza kakhulu ngoba sengikwazi ukondla umndeni wami ngemali engiyitholayo,” kusho lo wesifazane.
Uthe ukusebenza enxanxatheleni yezitolo kuyamsiza kakhulu ngoba kuke kufike abantu bezothenga kodwa bengenazo izifonyo, okwenza bagcine bezithenge kuyena.
Lo wesifazane uthe uyaqikelela ukuthi ngaphambi kokuba akudayisele ukuthela ngesibulalimagciwane, bese ukhetha isifonyo ozosithenga.
Imali ube eseyamukela ngesinye isandla, ayifake esikhwameni bese ethela izandla zakhe ngesibulalimagciwane.
Isifonyo akuvumelekile ukuba usilinganise, uma ususikhethile uthenga leso ngoba efuna ukuqinisa ezokuphepha. Ngosuku uthe udayisa ezicela ku-10.
Uthe yize abantu abazidayiselayo belimele ngokwebhizinisi ngenxa yayo iCorona kodwa elezifonyo libukeka libangenisela imali yize nje sebanda abazidayisayo ngoba bebona kwanda isidingo sazo.